၁ မှ ၁၀၀ အထိတရုတ်ဂဏန်းများနှင့်သူတို့၏အသံထွက် - UniProyecta
တရုတ်ဂဏန်း ၁ မှ ၁၀၀ အထိ
တရုတ်ပြည်ကြီး၏စီးပွားရေးတိုးတက်မှုကြောင့်လာမည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်း Mandarin Chinese သည်အရေးအပါဆုံးဘာသာစကားများထဲမှတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်ဟုလူအများကသဘောတူကြသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဘာသာစကားလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားလျှင်သင်စတင်နိုင်သည် တရုတ်ဂဏန်းများအရဘာသာစကားတစ်ခုကိုစတင်သင်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့်၊
ဘာသာစကားအားလုံးကဲ့သို့သင်ယူရန် တရုတ်ဂဏန်းများ ပထမဆုံးသင်ယူရမည့်အရာသည်အခြေခံဂဏန်းများဖြစ်သည်၊ ၀ မှ ၉ အထိသင်ယူပါအခြားဂဏန်းများသည်ဤအရာများနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နောက်တစ်ခု၊ မင်းနံပါတ်၊ သူ့ရဲ့တရုတ်စာလုံးနဲ့စပိန်ဘာသာကိုကြည့်လို့ရတဲ့ဇယားတစ်ခုကိုငါဝေမျှမယ်၊ ဒါကြောင့်မင်းနံပါတ်ရဲ့အသံထွက်ကိုစိတ်ကူးရနိုင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အသံထွက်ကိုနည်းနည်းပိုလေ့လာဖို့အွန်လိုင်းဘာသာပြန်သူကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။
1 တရုတ်ဂဏန်း ၁ မှ ၁၀ အထိ
2 တောလည်ရာ ၁ မှ ၉
3 တရုတ်ဘာသာဖြင့်ရာချီ၊ ထောင်နှင့်ချီ။
တရုတ်ဂဏန်း ၁ မှ ၁၀ အထိ
ဂဏန်း Chino ပင်ယင်
0 零/〇 လိန်း
1 တစ်ဦးက yī
2 နှစ် အာရ်
3 သုံး သူတော်စင်
4 လေး si
5 ºº” wǔ
6 å… liu
7 ခုနှစ် ဘာလဲ
8 ရှစ် ဘေ
9 ကိုး ဟီး
10 တကျိပ် ရှီ
တောလည်ရာ ၁ မှ ၉
11 တကျိပ်တပါး shíyī
12 တကျိပ်နှစ်ပါး shíèr
13 ဆယ့်သုံး shísān
14 ဆယ့်လေး shi ဟုတ်
15 ဆယ့်ငါး shi wǔ
16 ဆယ့်ခြောက် shíလီù
17 ဆယ့်ခုနစ် shi qī
18 ဆယ့်ရှစ် shíbā
19 ကိုးဆယ့်ကိုး ရှီဟီး
20 နှစ်ဆယ် အာshí
ဇယားနှစ်ခုမှာမင်းမြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း ၁၁ ကနေ ၁၉ ထိလုပ်ထားတဲ့အရာကနောက်မှာယူနစ်ကိုဆယ်ထားဖို့ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ပြောရလျှင်ဆယ့်နှစ်လုံး (shíér) ကိုshí (11) ér (19) ဖြင့်စသည်။
ဒါကတရုတ်နံပါတ်အများစုမှာသုံးတဲ့စည်းမျဉ်းတစ်ခုပါ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်း ၂၂ ကိုပြောချင်ရင်မင်းလုပ်ရမှာကတရုတ်လို "နှစ်လုံး၊ ဆယ်၊ နှစ်" လို့ပြောပါ။ လွယ်လွယ်လေးဘဲမဟုတ်လား။
100 ၏ yībǎi
200 二百 အိုဘီ
300 ၏ sānbǎi
1 000 တစ်ထောင် yīqiān
2 000 二千 အာqiān
10 000 တစ်သောင်း မင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
1000 000 တစ်သန်း yībǎiwàn
ပိုများသောဂဏန်းများအတွက်တူညီသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မင်း ၁၃၅ ကိုပြောချင်ရင်မင်းက 'တစ်ရာ၊ သုံးရာ၊ ဆယ်၊ ငါး' ဆိုပြီးပြောဖို့လိုတယ်။ အချို့သောစည်းမျဉ်းများနှင့်ခြွင်းချက်များရှိသည်မှာသေချာသည်၊ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့်သင်တရုတ်ဂဏန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာမရှိသင့်ပါ။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏နံပါတ်များနှင့်ကိစ္စကိုပိုမိုနားလည်နိုင်သောအလွန်ရှင်းပြထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြင်ဆင်ထားသည် တရုတ်ဂဏန်းများကိုအသံထွက်ရာတွင်ကူညီရန်ဒေသခံတရုတ်စကားပြောဆရာတစ် ဦး ရှိသည်.
categories Chino, ဘာသာစကား လက်မှတ်အညွှန်း
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဘာသာစကား » Chino » တရုတ်ဂဏန်း ၁ မှ ၁၀၀ အထိ
ဂျပန်ဂဏန်း ၁ မှ ၅၀ အထိ
ဂျာမန်နံပါတ်များ ၁ မှ ၁၀၀၀
"တရုတ်ဂဏန်း ၁ မှ ၁၀၀ အထိ" အတွေး ၇ မျိုး
31:2018 pm မှာအောက်တိုဘာလ 7, 21
28:2018 pm မှာနိုဝင်ဘာလ 9, 53
9:2019 pm မှာပြီလ 6, 25
18:2019 pm မှာဇွန်လ 2, 18
31:2019 pm မှာသြဂုတ်လ 1, 12
ဘယ်လိုလဲ !!! အရမ်းကောင်းတဲ့နေရာပါ၊ ပိုကောင်းလာဖို့ အများကြီး ကူညီပေးပါတယ်၊ မင်းရဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဆက်ထိန်းထားပေးပါ၊
20:2019 pm မှာစက်တင်ဘာလ 3, 06
27:2019 pm မှာစက်တင်ဘာလ 1, 50